Matio 13 - Ny Baiboly
Matio toko 13
18Koa henoy ary ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny mpamafy. 19Raha misy mandre ny tenin'ny fanjakan'Andriamanitra nefa tsy mahalala, dia avy ilay ratsy ka manesotra izay voafafy tao am-pony: dia izany no ilay nafafy teny an-dalam-be. 20Ary ilay nafafy tamin'ny tany be vato no izay mandre ny teny sy mandray azy an-kafaliana miaraka amin'izay, 21nefa tsy miorim-paka izy ka tsy maharitra ela; fa nony misy fahoriana sy fanenjehana noho ny teny, dia tafintohina miaraka amin'izay izy. 22Ilay nafafy tany anaty tsilo no izay mandre ny teny, fa ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena mamono ny teny ao aminy, ka tonga tsy mamoa izy. 23Fa ilay nafafy tamin'ny tany lonaka kosa no izay mandre ny teny ka mahalala azy; dia mamoa, ny sasany avo zato heny, ny sasany enim-polo, ary ny sasany telo-polo heny.
24Ary nanao fanoharana hafa taminy koa izy, nanao hoe: Ny fanjakan'ny lanitra dia mitovy amin'ny lehilahy izay namafy voa tsara tamin'ny taniny; 25fa raha natory ny olona, dia tonga ny fahavalony, ka namafy voan'ahi-dratsy tamin'ny vary, dia lasa. 26Nony naniry ny vary ka niteraka, dia nitranga koa ny ahi-dratsy. 27Dia avy ny mpanompon-dralehilahy nanao hoe: Tompoko, moa tsy voa tsara va no nafafinao tao amin'ny taninao, ka nahoana no tonga misy ahi-dratsy koa? 28Ny fahavaloko no nanao izany, hoy ny navaliny. Tianao va ny handehananay hiava azy? hoy ireo mpanompony taminy. 29Tsia, hoy izy, fandrao hogontanareo mbamin'ny vary, raha manongotra ny ahi-dratsy hianareo. 30Avelao hiara-maniry izy roroa ambara-pihavin'ny fijinjana; fa raha tonga ny taom-pijinjana, dia holazaiko amin'ny mpijinja hoe: Ongoty aloha ny ahi-dratsy, dia fehezo amboarany mba hodorana; ary angony ho any an-tsompitro ny vary.
36Tamin'izay, nony efa nampody ny vahoaka izy, dia mba nody, ary nanatona azy ny mpianany nanao hoe: Lazao anay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny ahi-dratsy. 37Ary namaly izy ka nilaza taminy hoe: Ny mpamafy ny voa tsara dia ny Zanak'olona; 38ny tanimbary dia izao tontolo izao; ny voa tsara dia ny zanaky ny fanjakana; ny ahi-dratsy dia ny zanak'ilay ratsy; 39ny fahavalo izay namafy azy, dia ny demony; ny taom-pijinjana, dia ny fahataperan'izao tontolo izao; ary ny mpijinja, dia ny anjely. 40Tahaka ny anangonana ny ahi-dratsy sy andorana azy amin'ny afo no hatao raha mby amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. 41Haniraka ny anjeliny ny Zanak'olona, ary ireo dia hanangona sy hamoaka ny mpanafintohina sy ny mpanao ratsy rehetra hiala amin'ny fanjakany, 42ka hanipy azy ao amin'ny memy mirehitra: any no hisy fitomaniana sy fikitroha-nify. 43Amin'izany kosa ny olo-marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny Rainy. Aoka hihaino izay manan-tsofina hihainoana.
44Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny rakitra nafenina tany an-tsaha, izay hitan'olona ka nafeniny tao ihany aloha; dia lasa tamin-karavoana izy nivarotra izay rehetra mety ho fananany, ary nividy io saha io.
45Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandranto mitady voahangy tsara. 46Ary nony nahita anankiray be vidy izy, dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy.
47Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harato nalatsaka tany anaty ranomasina, ka nanangona izao karazan-kazandrano rehetra izao; 48rahefa feno izy dia nosarihana ho eny amoron-drano, ka nipetraka ny olona nifantina ny tsara hataony an-karona, fa ny ratsy kosa nariany. 49Dia ho tahaka izany koa raha mby amin'ny fahataperan'izao tontolo izao: hivoaka ny anjely hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina, 50ka hanipy azy any amin'ny memy mirehitra: any no hisy fitomaniana sy fikitroha-nify. 51Efa azonareo va izany? Eny, hoy izy ireo taminy. 52Dia nanampy teny indray izy nanao hoe: Koa ny mpanora-dalàna rehetra izay mahay tsara ny amin'ny fanjakan'ny lanitra àry, dia tahaka ny raim-pianakaviana izay mamoaka zava-baovao sy tranainy avy amin'ny fitoeran-drakiny.
53Nony tapitra izany fanoharana izany, dia niala teo Jesoa, 54ka nankany amin'ny tany nahabe azy, ary nampianatra tao amin'ny sinagogany; dia gaga ny olona ka nanao hoe: Avy taiza ary no nahazoan'izy io izany fahendrena sy hery izany? 55Tsy ilay zanaky ny mpandrafitra va io? Tsy Maria va no anaran-dreniny, ary tsy Jakoba, sy Josefa, sy Simona ary Joda va no rahalahiny? 56ary moa tsy ety amintsika avokoa va ny anabaviny rehetra? Koa taiza no nahazoany izany rehetra izany? 57Ary tafintohina taminy izy ireo; fa hoy Jesoa taminy: Eo amin'ny tany onenany sy eo amin'ny ankohonany ihany no tsy mba voahaja ny mpaminany. 58Dia tsy nanao fahagagana betsaka teo izy noho ny tsy finoan'ireo. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.4427 seconds